Maxaad ka ogtahay filimkii Sayidka ee aan waligii la daawanin? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxaad ka ogtahay filimkii Sayidka ee aan waligii la daawanin?
Maxaad ka ogtahay filimkii Sayidka ee aan waligii la daawanin?
Sanadkii 1983-dii ayaa dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa ay maal-gelisay filim laga jilayay guumaysigii Ingiriiska iyo halgankii Sayid Maxamed Cabdile Xasan, kaasi oo ay gacanta ku haysay shirkad aflaanta sameysa oo laga leeyahay dalka Hindiya.
Dadkii filimkaasi jilayay oo tegay meelihii uu Sayidka tegay ayaa laga soo kala xulay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya, waxaana sidoo kale dadkii filimka jilayay kamid ahaa dad ajnabi ah oo laga keenay dibadda dalka.
Shaksigii metalayay Sayid Maxammed Cabdille Xasan ayaa la sheegay in uu ahaa qof ajnabi ah oo laga keenay diabdda dalka, waxaana filimkan lagu jilay magaalooyinka Taleex iyo Berbera.
Dadkii Soomaalida ahaa ee hogaaminayay filimkan ayaa waxaa kamid ah Saciid Saalax, Maxamuud Diirshe iyo Yuusf xaaji Aadan.
”Dadka waxaa looga sheekenayay sheekada, buuq qoran ayaa la raacayay oo nin walba waxaa uu raacayay qoraalka, hadii ay ahaan laheyd gabay, geerar iyo hadal tiraab ah, nin walbana waxaa uu sameynayo waa ay u qornaayeen”. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Cabdullahi Axmed Dafe oo kamid ahaa dadkii wax ka jilay filimkasi.
Cabdullaahi oo haatan ku nool magaalada Jigjiga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxaa uu heystaa shahaado uu sheegay in la guddoonsiiyay markii la duubayay filimka sannadkii 1984-tii, waxaana uu sidoo kale sheegay in waxyaabaha uu ku xasuusto filimkaasi ay kamid aheyd doorkii uu ka jilay iyo in la dilay isagoo qeyb ka jilaya filimka.
Duubista filimka ayaa markii la dhameeyay waxaa loo qaaday magaalada Mumbai ee dalka Hindiya, halkaasi oo la doonayay in lagu tifatiro.
Hase yeeshee inta aanan lasoo dhameystirin tifatirka filmka ayaa waxaa burburay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, wixii intaa ka dambeeyayna cidna meel kuma sheegi karto filimkaasi halka uu ku dambeeyay.
Sayid Maxammed Cabdille Xasan oo ahaa hogaamiyihii daraawiisha ayaa la dagaalamay Xabashida, Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxaana la sheegaa in uu geeriyooday sannadkii 1920-kii.
Previous articleSanataro Mareykan ah oo mas’uuliyada dilkii Khashoggi dusha u saaray binu salmaan
Next articleDaawo, Maxaa maalmihii u danbeeyay ka taagan Berbera